Fianarantsoa: Raikitra na voasakantsakana aza ny Atrik’asa Nasionaly K3F
mardi, 17 avril 2018 09:54
Rehefa avy namoaka ny Naoty ny prefen’i Fianarantsoa omaly hariva fa tsy azo atao ny Atrik'asa nasionaly karakarain’ny K3F (Fahamarinana-Fandriampahalemana-Fiadanana) androany dia tontosa soa aman-tsara izany izao maraina.
Nanomboka tamin’ny 07 ora maraina ny fotoam-bavaka, nosokafan'i Arsevekan'i Fianarantsoa Mgr Fulgence Rabemahafaly, ary natrehin'ireo olom-pirenena tsara sitrapo avy amin’ny lafivalon’ny Nosy.
Manodidina ny 800 eo ny mpandray anjara, avy amin’ny Faritra 22 eto amin’ny Nosy. Anisan’ireo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny praiminisitry ny tetezamita iraisana Jean Omer Beriziky, ny filohan’ny antoko PLD Saraha Rabeharisoa, ny pastera Mailhol, ny filohan’ny antoko Kintana sady mpikambana CRN Tabera Randriamanantsoa, ny mpandrindra nasionalin’ny OHT (Olona Hasin’ny Tany) Dr Ratefinanahary Emile.
Isany niatrika ny fanokafana ny Atrik’asa nasionaly ity ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Faritany Fianarantsoa Hary Andrainarivo, ny filoha lefitry ny CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy), ny lehiben’ny Faritra Matsiatra Ambony Herizo Randrianasolo.
Nandefa solontena ny FJKM amin’ny alalan-dRadavidson Andriamparany Benjamin sady namaky ny taratasy avy amin’ny filohany. Nandefa solontena ihany koa ny FLM sady namaky ny taratasy avy amin’ny filohany.
Ny minisitry ny fampianarana teo aloha Razafindrandriatsimaniry Marie Dieudonné Michel no Mpanolotra, ny minisitry ny fambolena teo aloha Rolland Ravatomanga no mpandrindra.
Misy vaomiera telo handraisana ny hevitry ny mpandray anjara dia ny Fahamarinana, Fandriampahalemana ary Fiadanana.
Aharitra roa andro moa ny fihaonana, anio 17 avrily sy rahampitso 18 avrily.